အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ (ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်) - News @ M-Media
အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲဖို့ (ဆောင်းပါးရှင် အာဘော်)
in သူ့အမြင် / ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် — November 6, 2015
နိုဝင်ဘာ ၆ ၊ ၂၀၁၅
ကျွန်တော်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ မွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာပဲ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ မြန်မာနုိုင်ငံသား ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကလည်း မြန်မာနုိုင်ငံသားတွေပါပဲ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်ကနေ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာကတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဘာသာရေးကို ထည့်သွင်းပြောပြရတာကိုတော့ အင်မတန်မှ မရိုးမရွံ့ဖြစ်မိပါတယ်။ နုိုင်ငံတကာမှာ ဥပမာ ပေါ့ဗျာ၊ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကို ဖတ်ရင် ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ ဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စက အရေးမပါတဲ့ကိစ္စမို့ အဲဒါကို တချို့နိုင်ငံ တွေမှာဆိုရင် လျှို့ဝှက်တောင် ထားကြပါတယ်။
ကျွန်တော်အမှတ်ရနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှေ့မှာ အိမ်က ကားကိုရပ်ထားတော့ ကားရှိတဲ့နေရာကို ကျွန်တော်က သွားနေတဲ့ အချိန်၊ ကားရဲ့တဘက်မှာ အင်္ကျီကျွတ်နဲ့ ရပ်နေတဲ့ လူတစ်ယောက်က ကျွန်တေ်ာ့ကို သေချာကြည့်ပြီး ဟေ့ကောင် ကုလား ၊ ဒါမင်းတို့နိုင်ငံ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီမှာလာပြီး -င်ဂေါင်းကျယ်ပြမနေနဲ့ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်သူ့ကို တခါမှ မမြင်ဖူးပါဘူး။ ဒါကြာခဲ့ပါပြီ။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်လောက်က ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ အဲလိုအပြောခံရတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရပိုင်ခွင့် (rights) ကို ဘယ်သူက အကာအကွယ်ပေးမှာလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော်စဉ်းစားခဲ့မိတယ်။ ကျွန်တော်အဖြေမရခဲ့ပါဘူး။ ရပိုင်ခွင့်ဆိုတာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ရပိုင်ခွင့်ကို ပြောတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြို အင်တာဗျူး
ဒီကနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုအင်တာဗျူး ဗွီဒီယိုဖိုင်ကို ကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာဗျူး ကျင်းပနေစဉ်အချိန်မှာတော့ ဘီဘီစီရဲ့ ဂျိုနာ ဖစ်ရှာကုို တွီတာကနေ follow လုပ်ပြီး တက်လာသမျှ ဖတ်ပါတယ်။ သူကလည်း မေးခွန်း အားလုံးလောက်နီးပါးကို ဆက်တိုက် တင်ပေးနေပါတယ်။
အားရကျေနပ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ကျွန်တော်မြင်နေကျ မုသားကင်းပြီး ပင်ကုိုယ်စိတ်ရင်းကို အခံထားတဲ့ မျက်နှာပေးတစ်ခုကို ဒီနေ့လည်း ကျွန်တော်ထပ်ပြီး မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒီအင်တာဗျူးမှာ ကျွန်တော်တို့ (အထူးသဖြင့် မွတ်စလင် လူနည်းစု) အတွက် အဖိုးတန်ခဲ့ အာမခံချက်တစ်ခုကို အဲန်အဲလ်ဒီကနေ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၅ နုိုဝင်ဘာ ၅ ၊ အဲန်အဲလ်ဒီရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲအကြို အင်တာဗျူးက သမိုင်းဝင်ပါပဲ။
ရိုဟင်ဂျာတွေက အရေးတကြီး အကူအညီလိုနေတယ် ၊ ခင်ဗျားရဲ့အစီအစဉ်က ဘယ်လိုလဲဆိုပြီး ဂျာမန်ရေဒီယိုကနေ မေးပါတယ်။ တခါ sky ကလည်း ရခုိုင်က ဂျီနိုဆိုက်ဒ်ကို ခင်ဗျား ရှုံ့ချမှာလားဆိုပြီး မေးပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြဿနာကို ချဲ့ကားတာမျိုး မလုပ်ဖို့ ပြောပါတယ်။ အဲလိုပြောရမှာ မြန်မာစကားပုံဖြစ်တဲ့ ကြီးတဲ့ပြဿနာငယ်စေ၊ ငယ်တဲ့ပြဿနာပပျောက်စေဆိုတာမျိုးလို ပြဿနာကို ကိုင်တွင်ဖြေရှင်းဖို့ မလွယ်တဲ့အထိ အကျယ်မချဲ့ကြဖို့ သေချာပြောပါတယ်။ အဲဒီအဖြေနဲ့ တဆက်တည်းမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကတိပြု ပြောကြားတာက – နုိုင်ငံသားတွေအားလုံးအတွက် ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေအကာအကွယ်နဲ့ လူအခွင့်အရေးစံချိန် စံညွှန်းတွေလည်း ရှိစေရမယ်လို့ ကတိပြုမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် ဂျိုနာဖစ်ရှာရဲ့ တွီဒ်မှာ အဲဒီကတိပေးပုံမျိုး ထည့်မရေးထားတာကြောင့် မသိခဲ့ရပါဘူး။
အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ သတိပြုရမှာက အဲန်အဲလ်ဒီသည် နုိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် ထိရောက်တဲ့ ဥပဒေအကာအကွယ်နဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစံချိန်တွေ ရစေရမယ်လို့ ကတိပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ ဒီလို အထူးကရုစုိုက်ဖြေကြားရမယ့် ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုမှာ နုတ်ဆိတ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ခံနေ ခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တုိုင်လည်း အဲလိုပဲ ယူဆခဲ့မိတဲ့ အချိန်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူကသာ အလျင်ကတည်းက ဖိနှိပ်ခံ လူနည်းစုအတွက် တခုခု ပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် သူ့စကားက ဘယ်လောက်ထိတာသွာမှာလည်း။ နုိုင်ငံတကာမှာတော့ အမြင်လှနိုင်ပေမယ့် ပြည်တွင်းမှာ အဲဒီစကားကို အသုံးတော်ခံပြီး အမြတ်ထုတ်ကြမှာ မလွဲမသွေပါပဲ။ သူစကားကို အာဏာရ အစိုးရကလည်း ဘယ်လို မှသဘောထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူ့စကားကြောင့် အခြေအနေ တိုးတက်လာစရာအကြောင်းလဲ မရှိပါဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲန်အဲလ်ဒီက အာဏာရ ပါတီ မဟုတ်လို့ပါပဲ။ ဒါကို စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။
၁၉ ၈၂ နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရှိရေး ဥပဒေ
၁၉ ၈၂ နုိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မေးခွန်းတစ်ခု တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥပဒေကို သူပြဌာန်းတာမဟုတ်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ ဥပဒေပြုလွှတ်တော်ကသာ ပြဌာန်းတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။ တဆက်တည်း အဲန်အဲလ်ဒီ အနေနဲ့ အခုအချိန်မှာ အဖြေမပေးနိုင်တဲ့ မေးခွန်းများရှိနေတဲ့ အကြောင်း၊ လူထုရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုကို ရပြီး အဲန်အဲလ်ဒီ အနုိုင်ရရေးက အဓိက ကျကြောင်းဖြင့် ဖြေကြားထားပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အထူးသဖြင့် သတိပြုရမှာက ၁၉ ၈၂ ဥပဒေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောဆိုရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဥပဒေကို ဥပဒေပြုလွှတ်တော်က ပြဌာန်းတယ်ဆိုတာမှာတင် ရပ်မပြစ်ဘဲ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းထိ စောင့်ကြည့်ပါ။ အဲန်အဲလ်ဒီနိုင်ရင် ဘာလုပ်မလဲဆိုတာ သိရပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီး ဖြည့်စွက်ပြောပါတယ်။ ဒါဟာ လိုအပ်လို့ ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့အခါမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တုိုတောင်းတဲ့ အဖြေတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသားဖြေသွားတာကို သတိထားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
boat-people ခေါ် လှေစီးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အမေးရှိတဲ့ အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တုိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး မူယာမာယာများတဲ့ ဇာတ်ထုပ်ကြီးဖြစ်နေတာကို နုိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုကြောင်း၊ မတူညီတဲ့ အုပ်စုတွေအကြား အကွဲအပြဲတွေကို ဖန်တီးမယ့်အစား အတူတကွ ပူးပေါင်းနုိုင်ဖို့ နုိုင်ငံတကာက ကူညီသင့်တဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။
၂၀၁၅ မှာ အဲန်အဲလ်ဒီနိုင်လည်း မဘသကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး၊ အဲဒီအုပ်စု ဆက်ရှိနေအုန်းမယ်ဆိုတဲ့ အသံတွေ ရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ မဘသသည် ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မညီတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်၊ ဘာသာရေးကို နုိုင်ငံရေးမှာ မရောယှက်ရဘူး၊ ဒါကြောင့် အဲန်အဲလ်ဒီက ဘာသာရေး ကိစ္စကို မဲဆွယ်စဉ် လုံးဝ ထည့်မပြောပါဘူးဆိုပြီး မဘသအတွက် မေးတဲ့ မေးခွန်းကို ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲန်အဲလ်ဒီက အခြေခံဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို ဆက်လက်ရပ်တည်ခွင့်ပေးမှာလား ၊ ပေးမယ် မပေးဘူးဆိုတာ ၂၀၁၅ အလွန်ကို ကျော်ပြီး တွေးတောနေမယ်ဆိုရင် သို့လော သို့လောနဲ့ ကိုယ့်မဲတစ်မဲ စွန့်လွှတ်ရကိန်းရှိပါတယ်။
ကျွန်တော် ကျွန်မတို့ကို ခိုင်းပါ၊ လုပ်ပေးပါရစေလို့ ပြောထားတဲ့ အဲန်အဲလ်ဒီ ဟာ တခါမှ အစိုးရအဖြစ် အခုိုင်းမခံရသေးပါဘူး၊ ဒါကို on what basis ပေါ့ဗျာ၊ ဘယ်လို အကြောင်းအကျိုးအကြောင်းတွေနဲ့များ အဲန်အဲလ်ဒီ အာဏာရလည်း မဘသ ဆက်ရှိနေမယ်လို့ တွေးတောပါသလဲ? မဘသ ဆက်ရှိနေရင်တောင် ထင်တိုင်းကျဲလို့ ရနုိုင်တော့မယ် မဟုတ်ပါ။
နုိုင်ငံသား မွတ်စလင်တွေအတွက် အဓိက အာမခံချက်ကတော့ “…proper protection in accordance with the law and in accordance with the norms of the Human rights.” ပါပဲ။ နုိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေရဲ့ အကာအကွယ်ကို စနစ်ကျစွာ ရရှိနုိုင်စေရမယ်၊ လူ့အခွင့်အရေး စံတွေအတုိုင်းလည်း ဖြစ်စေရမယ်။ ကဲ ၊ ခင်ဗျားတို့ လုိုချင်တဲ့ သာတူညီမျှ နုိုင်ငံသား အခွင့်အရေး၊ ဒီထက်ဘာကို လိုချင်ပါသေးသလဲ ?
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ နိုင်ငံသားတုိုင်း သာတူညီမျှတဲ့ နုိုင်ငံသားအခွင့်အရေးဆုိုတာ ပါရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အဲန်အဲလ်ဒီရဲ့အာမခံချက်က ကျွန်တော်တို့အတွက် ကျေနပ်စရာ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ နဖူးပေါ်လက်တင် စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ်။
သို့သော် နုိုဝင်ဘာ ၈ မတုိုင်ခင်အထိသာ အချိန်ရတော့ပေမယ့် စဉ်းစားဖို့ လုိုအပ်လောက်တဲ့ အချိန်ကလည်း အများဆုံး နာရီပိုင်းခန့်ပဲ လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
** စာရေးသူ၏ ဘလောဂ် စာမျက်နာမှ ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
Tags: 2015election, DASSK, NLD